Hull City oo kooxda difaacaneysa EPL-ka ee Leicester City garaacday, kulankii ugu horeeyay. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Hull City oo kooxda difaacaneysa EPL-ka ee Leicester City garaacday, kulankii ugu horeeyay.
Hull City oo kooxda difaacaneysa EPL-ka ee Leicester City garaacday, kulankii ugu horeeyay.
Hull City oo kasoo laabatay heerka labaad ayaa guuldaradii ugu horeysay dhadhansiisay kooxda horay wacdaraha uga dhigtay England Leicester City.
Bilaawga cayaartaba Leicester City ayaa u muuqatay mid xakamayneysa kubadda . Demarai Gray auaana isku dayguu uhu horeyay sameeyay, balse uma suuragalin da’yarka Foxes.
daqiiqadii 25-aad Leicester City ayaa fursad fiican heshay markii Mahrez uu kubad fiican u gudbiyay Danny Drinkwater, laakiin kubadaas si wanaagsan uguma faa’iideysan.
Qeybta Hore ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0, oo ay hogaanka ku heyso Hull City oo lagu neynaaso (Tigers) waxeyna gooolkaas kaga mahad celinayaan ciyaartoydooda kala ah Hernandez Diomande.
Previous: Dhegeyso:- Barnaamijka Aragtida Islaamka ee Idaacadda Himilo.
Next: Xogta kulanka Bournemouth iyo Man United